// UMFCCI Administrator // August 10, 2014 // No Comments ပောာပြောဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမ�...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသော ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်လျှက် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ဟောပြောဆွေးနွေးမည့် “Strengthening Public Private Dialogue for Private Sector
// UMFCCI Administrator // August 4, 2014 // No Comments မြန်မာ-ထိုင်း စီးပွားရေး လုပ�...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Ministry of Commerce, Department of Foreign Trade (DFT) မှကျင်းပသည့် မြန်မာ-ထိုင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ (Myanmar-Thai Business Matching) ကို ဇူလိုင်၂၃ရက်၊ နံနက်(၉)နာရီတွင် Chatrium ပာိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ယင်းစီးပွားရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ
The Republic of the Union of Myanmar Vice-Presiden...
“Orientation on Business Model Contest” ပြုလုပ်မည်
Check OUt the UMFCCI Website
If the sheer number of “Safety First” signs were any indication, Yangon’s construction sites would be safe places to work. But asacasual stroll past too many development sites reveals, workplace safety is often not the highest priority.
June 11, 2014 Myanmar Citizens Investment Law
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဗြိတိန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (၂၃) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့် နေရာပြောင်းလဲခြင်း
PwCနှင့် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တို့ပူးပေါင်း၍ IPO(Initial Public Offering)ဆိုင်ရာ ပောာပြောပွဲကျင်းပ
Sichuan – Myanmar စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲသို့ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးအေးလွင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်မှ ဂျာမနီနိုင်ငံ GIZ အဖွဲ့အစည်းသို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်သော ပညာရပ်များသင်တန်းအတွက် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များအတွက် “Management Handbook for Associations in Myanmar” စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
အာဆီယံခေါင်းဆောင်များနှင့် အာဆီယံစီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပ
Plenary Session: Special Economic Zones Moderator: Rico Hizon, News Anchor and Reporter, BBC World News
Back to top © 2014 UMFCCI